Shwe Myanmar House | Pathein Industrial City Project (ပုသိမ်စက်မှုမြို့တော်စီမံကိန်း)
Pathein Industrial City Project (ပုသိမ်စက်မှုမြို့တော်စီမံကိန်း)
ကြေငြာတင်ခဲ့သည့်နေ့ 06 Apr 2020
အဆင့်မြင့် အိပ်ခန်း 0
ရိုးရိုး အိပ်ခန်း 0
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးရှိ ပုသိမ်မြို့နယ်တွင် အကြီးမားဆုံးစက်မှုဇုန်ဖြစ်သည့် Pathein Industrial City အတွင်းရှိ စစ်မှန်သော စက်မှုဇုန်မြေဧကပေါင်းများစွာကို Shwe Myanmar House Real Estate မှ ရောင်းချခြင်း၊ နှစ်ရှည်ဌားရမ်းခြင်းများကို လူကြီးမင်းတို့စိတ်တိုင်းကျ စတင်ဆောင်ရွက်ပေးနေပါပြီ။ 🤩🤩❤️
♠️ Pathein Industrial City အတွင်းရှိ စက်မှုဇုန်မြေများအား ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုပြုလုပ်ရာတွင် မိမိတို့စိတ်တိုင်းကျ စက်မှုဇုန်မြေဧကပေါင်းများအား တစ်နေရာတည်းတွင်ရရှိနိုင်ခြင်း။ 😮😮
♠️ စက်မှုဇုန်အတွင်း အဓိကလိုအပ်သည့် ရေ၊ လျှပ်စစ်များအား အခက်အခဲမရှိ ရရှိနိုင်ခြင်း။ 👍👍
♠️ MIC မှချပေးထားသော တရားဝင်ပါမစ်မြေဖြစ်ခြင်း။ 🤝🤝
♠️ Pathein Industrial City သည် ရေလမ်းကြောင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အဆင်ပြေလွယ်ကူစေရန် အတွက် ဆိပ်ကမ်းကိုလည်း စတင်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေပြီ ဖြစ်တာကြောင့် ပြည်တွင်းပြည်ပက ရင်နှီးမြုပ်နှံသူများအနေဖြင့် Logistic & Supply chainကို အခက်အခဲမရှိ import, export လုပ်နိုင်ခြင်း။ 😎😎
👉👉 Pathein Industrial City (စက်မှုမြို့တော်)သည် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအထူးကောင်းမွန်သော စက်မှုဇုန် ဖြစ်သည့် (ပုသိမ်စက်မှုမြို့တော်)တွင် လူကြီးမင်းတို့ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုပြုလုပ်ရာ၌ အကောင်းဆုံး စက်မှုဇုန်မြေနေရာများဖြစ်တာကြောင့်👈👈 ကျွန်တော်တို့ Shwe Myanamr House နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီး လူကြီးမင်းတို့အတွက် အဆင်ပြေသင့်တော်မယ့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းအသစ်ကို အခုဘဲ အကောင်အထည်ဖော်လိုက်တော့နော် 💚💚💚 လူကြီးမင်းတို့အနေနှင့် အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက >>>
ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အႀကီးမားဆုံးစက္မႈဇုန္ျဖစ္သည့္ Pathein Industrial City အတြင္းရွိ စစ္မွန္ေသာ စက္မႈဇုန္ေျမဧကေပါင္းမ်ားစြာကို Shwe Myanmar House Real Estate မွ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ႏွစ္ရွည္ဌားရမ္းျခင္းမ်ားကို လူႀကီးမင္းတို႔စိတ္တိုင္းက် စတင္ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါၿပီ။ 🤩🤩❤️
♠️ Pathein Industrial City အတြင္းရွိ စက္မႈဇုန္ေျမမ်ားအား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ မိမိတို႔စိတ္တိုင္းက် စက္မႈဇုန္ေျမဧကေပါင္းမ်ားအား တစ္ေနရာတည္းတြင္ရရွိနိုင္ျခင္း။ 😮😮
♠️ စက္မႈဇုန္အတြင္း အဓိကလိုအပ္သည့္ ေရ၊ လၽွပ္စစ္မ်ားအား အခက္အခဲမရွိ ရရွိနိုင္ျခင္း။ 👍👍
♠️ MIC မွခ်ေပးထားေသာ တရားဝင္ပါမစ္ေျမျဖစ္ျခင္း။ 🤝🤝
♠️ Pathein Industrial City သည္ ေရလမ္းေၾကာင္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အဆင္ေျပလြယ္ကူေစရန္ အတြက္ ဆိပ္ကမ္းကိုလည္း စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပက ရင္ႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္ Logistic & Supply chainကို အခက္အခဲမရွိ import, export လုပ္နိုင္ျခင္း။ 😎😎
👉👉 Pathein Industrial City (စက္မႈၿမိဳ႕ေတာ္)သည္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအထူးေကာင္းမြန္ေသာ စက္မႈဇုန္ ျဖစ္သည့္ (ပုသိမ္စက္မႈၿမိဳ႕ေတာ္)တြင္ လူႀကီးမင္းတို႔ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ရာ၌ အေကာင္းဆုံး စက္မႈဇုန္ေျမေနရာမ်ားျဖစ္တာေၾကာင့္👈👈 ကၽြန္ေတာ္တို႔ Shwe Myanamr House နဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး လူႀကီးမင္းတို႔အတြက္ အဆင္ေျပသင့္ေတာ္မယ့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအခြင့္အလမ္းအသစ္ကို အခုဘဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္လိုက္ေတာ့ေနာ္ 💚💚💚 လူႀကီးမင္းတို႔အေနႏွင့္ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက >>>
☎ : 01-8203466, 09-796688880, 09-796688881, 09 - 457494732
📩 : threefriendsgroup2000@gmail.com
🏠 : No.(44/A2), Maharzayya Street, Kyi
Taw Wards, Mingalar Taung Nyunt Township,
ယေဘုယျ ပါဝင်သော ပစ္စည်းများ
လိပ်စာ Pathein Industrial City
မြို့နယ် / မြို့ Pathein
ပြည်နယ် / တိုင်း Ayeyarwady
Rating နဲ့ Comment ပေးရန်အတွက် အကောင့်ဝင်ပါ
ကြေငြာတင်ခဲ့သည့်နေ့: Sat, Feb 23, 2019
Name: Email: အီးမေးလ် အကြောင်းအရာ: မက်ဆေ့:
No(1021), Ground Floor, Ngwe Tharki Housing, Part (B), Corner Of Mahar Bandula Street & Ngwe Tharki Street, Ward(29), North Dagon Township, Yangon, Myanmar.
အသုံးပြုသူ မှတ်ပုံတင်ရန် -- Or -- အကျိုးဆောင်များ မှတ်ပုံတင်ရန်